မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်များ အမြန်ဆုံးပြန်ဖွင့်ပေးရန် ဆွီဒင်သံရုံးတောင်းဆို - Pyone Pyone Lay
မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု များအား ဖြတ်တောက် ထားသည့် အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် များစွာ စိုးရိမ် ပူပန် ပါသည်။
အရေးပါသည့် သတင်း အချက်အလက် များအား လက်ခံ ရရှိ ပိုင်ခွင့်သည် မြန်မာ ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး၏ အခြေခံ အခွင့်အရေး ပင်ဖြစ်ပြီး
လက်ရှိ မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက် များအား ဖြတ်တောက် ထားခြင်းကြောင့် ထိုအခွင့်အရေးမှာ ဆိုးဝါးစွာ ချိုးဖောက် ကန့်သတ်ထားခြင်း ခံနေရ ပါသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှ မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု များအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူများအား မိမိတို့မှ တောင်းဆို ပါ သည် ။
.We are concerned that the mobile internet service has been shut down in Myanmar since 15 March.
The right to receive an impart information isafundamental right for all in Myanmar,
which is being seriously restricted by the closing of the mobile internet service.
We call on the responsible authorities to immediately restore access to mobile internet services in Myanmar.
Crd to MTK channel
မိုဘိုငျးဖုနျး အငျတာနကျမြား အမွနျဆုံးပွနျဖှငျ့ပေးရနျ ဆှီဒငျသံရုံးတောငျးဆို
မတျလ ၁၅ ရကျနမှေ့ စတငျကာ မွနျမာနိုငျငံ တဈဝှမျး မိုဘိုငျးဖုနျး အငျတာနကျ ဝနျဆောငျမှု မြားအား ဖွတျတောကျ ထားသညျ့ အတှကျ မိမိတို့အနဖွေငျ့ မြားစှာ စိုးရိမျ ပူပနျ ပါသညျ။
အရေးပါသညျ့ သတငျး အခကျြအလကျ မြားအား လကျခံ ရရှိ ပိုငျခှငျ့သညျ မွနျမာ ပွညျသူ တဈရပျလုံး၏ အခွခေံ အခှငျ့အရေး ပငျဖွဈပွီး လကျရှိ
မိုဘိုငျးဖုနျး အငျတာနကျ မြားအား ဖွတျတောကျ ထားခွငျးကွောငျ့ ထိုအခှငျ့အရေးမှာ ဆိုးဝါးစှာ ခြိုးဖောကျ ကနျ့သတျထားခွငျး ခံနရေ ပါသညျ ။
မွနျမာနိုငျငံမှ မိုဘိုငျးဖုနျး အငျတာနကျ ဝနျဆောငျမှု မြားအား အမွနျဆုံး ပွနျလညျ ဖှငျ့လှဈပေးရနျ တာဝနျရှိသူမြားအား မိမိတို့မှ တောငျးဆို ပါ သညျ ။
We are concerned that the mobile internet service has been shut down in Myanmar since 15 March.
which is being seriously restricted by the closing of the mobile internet service. We call on the responsible
authorities to immediately restore access to mobile internet services in Myanmar.
ပစ်ခတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာ ရွှေရင်အေး၊မုန့်လက်ဆောင်းဆိုတဲ့ အသံ သဲ့သဲ့ ကြားရလို့ လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ပစ်ခတ်နေ တဲ့ကြားထဲမှာ ရွှေရင်အေး၊ မုန့်လက်ဆောင်းဆိုတဲ့ အသံ သဲ့သဲ့ ကြားရလို့ လိုက်ကြည့်မိတယ်။ လှည်းကို တွန်းပြီး သွားနေတဲ့ ဒီညီလေး ကိုတွေ့တယ်။ တစ် ခွက် ဘယ်လောက်လဲ။ ၅၀၀ ပါ အစ်ကို။ ခွက် ၃၀ ပေးကွာ။ ဟာ — ဟုတ်ကဲ့အစ်ကို။ ငါ ပြန်လာယူမယ် ဟုပြောပြီး လုပ်စရာရှိတာ သွားလုပ်။ ပြန်လာတော့ ခွက် ၃၀ ပြင်ဆင်ပြီးနှင့်ပြီ။ ပြီးပြီ အစ်ကို …တကယ်တော့ ငါက တစ်ခွက်ပဲ သောက်မှာဗျာ — ငိုင်ကျသွားပြီး မျက်နှာ …